Wasaaradda Caafimaadka oo hakisay shaacinta kiisaska COVID-19 | KEYDMEDIA ONLINE
Wasaaradda Caafimaadka oo hakisay shaacinta kiisaska COVID-19
Horraantii Sanadkii 2020 ee soo if-bixii cudurka Coronovirus ee Gudaha Soomaaliya wuxuu xanuunku haleelay in ku dhaw 22 kun oo qof, waxana u geeriyooday tiro ka badan kun ruux, welina qatartiisu waa mid jirta, inkastoo Wasaaradda Caafimaadku ka gaabisay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa wixi ka danbeeyey 10-kii bishan aan bulshada Soomaaliyeed la wadaagin xogta kiisas xanuunka COVID19, oo markaasi mareyey meel halis ah oo aad u sareysa, iyadoo xaaladaha Corono ee maalinkaas la helay ay ku dhawaayeen 400 boqol.
Aamustnaanta dheer ee Wasaaradda ayey waxgaradku ku macneynayaan saameyn uga timid dhanka doorashooyinka, maadaama dhaqaalihii howlahaasi lagu qaban lahaa loo weeciyey arrimaha doorashada, waana sababta ugu weyn ee madaxda Wasaaradda ku kalifaya in ay gaabsadaan.
Bahda Caafimaadka ayaa sheegaysa in aysan macquul gal ahayn in cudurku uu ka dhamaaday Soomaaliya, marka la eego karantiilka oo yaraa iyo wacyiga bulshada, waxana madaxda Wasaaradda ay uga digeen in ay dayacaan Caafimaadka bulshadooda oo ka muhiimsan ololaha doorashada ee dhaqaalaha faraha badan lagu bixinayo.
Dhaqaatiirta ayaa wal wal ka muujinaya in bulshada ay is dhex yaacayaan xilli aan si rasmi ah loo xaqiijin inuu cudurku ka dhamaaday dalka, waxan ay xuseen in Wasaaraddu ay hakad galisay xiriirkii ay la lahayd bahda caafimaadka ee ku qotomay la dagaalanka COVID19, iyadoo la kala diray horaantii todobaadkan guddi dhaqaatiir ah oo ay horey Wasaaraddu u sameysay.
Dhanka kale xog lagu kalsoonaan karo oo ay Warbaahinta KEYDMEDIA ONLINE heshay ayaa tilmaamaya in hoggaanka Villa Somalia ay masuq maasuqeen dhaqaale ka yimid hay'adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO), kaasoo loogu tala galay in lagula tacaalo kiisaska cudurka ee kordhaya, waxana taa badalkeeda ay dhaqaalahaasi damacsan yihiin in ay u adeegsanayaan olalahooda doorashada, iyagoo is-afgarad hoose la gaaray Wasiirka Wasaaraddaasi.
Arimahaasi iyo qaar kale waa kuwa kuu muujinaya hab dhaqanka naxariis darrada ah ee ay ku caan baxeen Kooxda sida sharci darrada ah ku fadhisa Madaxtooyada dalka, kuwaasoo aan lahayn qorshe siyaasadeed iyo dan qaran, isla markaana uu hadafkoodu yahay inuu dalku noqdo meel lagu kala tago taladooda dhicisawday kadib.
Waxaa sidoo kale yar dadka qaatay talaalka Coronovirus oo dhowr jeer diyaarado sida ay soo gaareen Muqdisho, iyadoo hanaanka qeybintiisa loo adeegay hab qaldan oo ku saleysan boob iyo qof jecleysi, mana gaarin dadkii ugu nuglaa ee loo baahna in lagu bilaabo,waana mid adkeyneysa in xanuunku uu ka suulo gudaha dalka.
Tan iyo markii uu COVID19 Magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha ka soo shaac baxay, waxa uu dunida ku noqday halis caafimaad oo soo korortay, isagoo kala xiray guud ahaan dunida, inkastoo laga soo kabtay hadana raadadkiisu waa kuwa weli sii muuqda.